Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. (yekare zita kambani. Foshan Prostar Science & Technology Development Co., Ltd) chiri zvebhizimisi anorenda paakapiwa ne US, Taiwan uye Mainland China vanopfuura makore akawanda kuti mukugadzira uye zvokutengeserana ruzivo .
Prostar Ups hwakagadzwa muna 1998, unyanzvi pamasikiro uye kugadzirwa yepamusoro OEM uye Prostar pachake muchiso kuti maindasitiri Uninterruptible Power Supply (Ups), Power Inverter, Solar ukomba, Solar Power System uye Wind Power rudzi hurongwa, uye Emergency Power Supply ( EPS) uyewo yokuzvigadzirisa-akasununguka okuchengetera mabhatiri.
Prostar ane ruzivo chaizvo uye nyanzvi Design uye Research Department dzinoshanda pamwe vatengi kwavo chigadzirwa kukura uyewo mazano nokusingaperi kuwedzera Prostar muchiso siyana. Other mapoka inosanganisira Quality Control Center, Rezvokutenga & Production Center, uye Sales uye Customer Service Center.
Prostar munongova anokonzera mabhizimisi kusimudzirwa uye basa iri Mainland China. Kuburikidza gumi kuedza kukuru, Prostar akaita posita vakapiswa akatevedzana magetsi uye mabhatiri zvikuru kushandiswa muminda mari, Telecom, Magetsi, peturu kemisitiri, mari uye mitero kuna China, uye tanga norukudzo akataura nevatengi. Achitora uye kuita nyika-kirasi zvinhu pamwe nenyanzvi wose mafungiro sezvo ayo basa, Prostar achingoramba kugara tichidzidza uye utsanzi kuedza kukwira kukwirira mutsva basa. We muchizvikudza kuomerera nomudzimu "Kuvimbisika, Cooperation, makwikwi zvinhu uye".
Guangdong Prostar New Energy Technology Co., Ltd. ane ruzivo rwokugadzira vashandi vakawanda, uye vose vashandi vedu vave pasi nemazvo hwokugadzira kurovedzwa uye ongororo. Prostar akapfuura kuti authentication pamusoro ISO9001, ISO14001, CE, RoHS uye IQNet (pose nhengo kunyika dzinopfuura 30). The kuzviomesera uye nokungwarira yepamusoro Kutarisira kunoita nemakasitoma chivimbo zvikuru. Kwemakore, kuti Prostar vakapiswa zvigadzirwa vari rinoparadzirwa Europe uyewo Affrica, Oceania, Southeast Asia, South America neMiddle East yose.
Achishandisa kusangana uye Optimization mari, Prostar simbisa inokosha kuronga pamusoro Quality, Structure, Marketing, Fashion uye Innovation. Kutsigira nheyo "Customer uye Credibility First", tinotenda kuti Optimization kuti vakarongeka unhu ndiyo chinodiwa pakupedzisira chinangwa chedu kuti vatengi kugutsikana. Tinokoka vatengi zvedu zvose kutitsigira uye kushanda pamwe chete kuti vawane tose tibatsirwe. Pachokwadi tariro tinogona kuva basa kwamuri mune ramangwana! Nokuti kubvunzurudza, unogona titumirei e-mail pa info@prostar-cn.com.